Ithuluzi Elifanele Lothonya noma Lokuthola Intatheli | Martech Zone
ULwesihlanu, February 14, 2014 NgoLwesine, Juni 18, 2015 Douglas Karr
IMeltwater ibe ngumxhasi omkhulu webhulogi yethu. Senze i-webinar yomhlaba wonke nabo ekulaleleni komphakathi okwakugcwele ukuhlangana futhi kwaba nempendulo enkulu. Futhi sesikulungele ukukhipha i-infographic yethu yokuqala nabo! Ukuxhaswa kugxile kwimikhiqizo yabo yezindaba neBuzz yokulalela ngokwesiko nangokwezenhlalo, ngokulandelana, kepha bengifuna ukuveza isici somkhiqizo wabo wezindaba zabasebenzi bePublic Relations esenza impilo yami njenge umthelela kulula kakhudlwana…
Iningi lamapaki engiwathola kochwepheshe bePublic Relations livela kukheli labo futhi bayizicasuli ze-batch and blast ezivala ibhokisi lami lokungenayo. Laba bantu basebenzisa amathuluzi wendabuko wokubheka ama-PR afaka uhlu lwekheli lami le-imeyili futhi bangikopela ukunginaki. Abaqondi ukuthi kanjani phonsa i-blogger futhi ngiyaqiniseka ukuthi izintatheli zithanda amaqhinga abo ngisho nangaphansi.
Ngiphendula imigomo empofu noma engabalulekanga ngokusobala ukuze lowo muntu athathe imizuzu engu-5 ukubona ukuthi okuqukethwe kwami ​​kuyahambisana yini neklayenti lakhe. Angicabangi ukuthi iningi labo liyakwenza lokho njengoba belijahile futhi abacabangi ukuthi kukhona imiphumela yezenzo zabo. Kepha kukhona. Abantu abanjengami ngokushesha bababiza njengoJunk ukuze singaphinde sibone enye iphimbo ebhokisini lethu lokungenayo. Lokho kuyishwa langempela kulowo muntu we-PR - okungenzeka ngolunye usuku waba nesilinganiso esihle sebhulogi yethu.
Izolo, ngithole i-imeyili ye-pitch evela ku-PR Agency isebenzisa Amathuluzi wokufinyelela e-Meltwater. Ngeke ngikhulume ngomthumeli ngoba bebengafanelekile - kepha i-imeyili ibiyi-HTML enemidwebo futhi ibinenketho engcono emhlabeni kuyo - i isixhumanisi sokukhipha ohlwini. Ukuchofoza leso sixhumanisi, ngilethwe kwesinye isikrini:
Wow, inketho yokuzikhipha ohlwini lwalezi zinkundla noma yonke i-database yemidiya! Lokho kunamandla, okusobala futhi kwenza i-PR agency kanye neMeltwater baphendule kunoma ngubani osebenzisa kabi uhlelo lwabo. Okuthakazelisa nakakhulu inketho ye-imeyili evela eMeltwater noma ehanjiswa isevisi yakho ye-imeyili. Lelo ileveli elengeziwe lokuphendula njengoba amaklayenti amaningi e-imeyili enikeza amandla okuhambisa amakheli e-imeyili ngokuzenzakalela noma uwavimbele.
Uma uhola ubudlelwano bomphakathi obuchwepheshile noma i-ejensi yokufinyelela futhi ufuna ngempela ukuthi iqembu lakho lakhe ubudlelwano (njengoba kufanele) futhi ubenze baphendule, lolu uhlobo lwethuluzi olidingayo ukuze ufinyelele. Ungasayiphathi IMeltwater inabaxhumana nabezindaba abangaphezu kwama-350,000 ku-database yabo ngethani lemininingwane kulowo nalowo ukukusiza ekutholeni abagqugquzeli abafanele nezintatheli.
Ukudalulwa: Lokhu okuthunyelwe akuzange kucelwe ngabakwaMeltwater, kwaba yimi kuphela.
Tags: i-pitchphonsa i-imeyiliukuqinisa abathonyaizintatheli ezigxekayoprezimayelana Nomphakathi